ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤ ဆောင်းပါး သည် လတ်တလော အဖြစ်အပျက် ကို တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးပါ သတင်း အချက်အလက်များ သည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၂၀၂၁–၂၀၂၂ မြန်မာနိုင်ငံ ခုခံတော်လှန်စစ်
၂၀၂၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ရေးအခြေအနေပြ မြေပုံ
မတ် ၂၀၂၁ – လက်ရှိ
မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ
သေဆုံးသူ ၁၁,၀၀၀ (၂၀၂၁)
ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် ဟု ပိုပြီး လူသိများသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မြန်မာနိုင်ငံ ခုခံတော်လှန်စစ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းတွင် အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ကို စစ်ကောင်စီက လိုက်လျောခြင်းမရှိပဲ လုံခြုံရေးအင်အားအလွန်အကျွံသုံးကာ အဓိကရုဏ်း ဖြိုခွင်းရေးလက်နက်များသာမက စစ်မြေပြင်လက်နက်များကို အသုံးပြုကာ နှိမ်နင်း ဖြိုခွင်းမှုအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၏ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်သည်။  ဤပဋိပက္ခကို ထကြွခြင်းထက် ပြည်တွင်းစစ်ဟု ကုလလူ့အခွင့်အရေး အကြီးအကဲက သတ်မှတ်ခဲ့သည်။  ACLED ၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီး လူပေါင်း ၁၁,၀၀၀ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၂.၁.၁၁ ခရစ္စမတ်အကြို လူသတ်ပွဲ
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ပြည်သူလူထုမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရကို စစ်တပ် မှ ဖြုတ်ချပြီး စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ကို COVID-19 ကန့်သတ်ချက် ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ဟုစွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့သလို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေါ်ကီတော်ကီပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေမှ အပ အခြားသော ဝန်ကြီးများနှင့် အစိုးရအကြီးအကဲများကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဦးမြင့်ဆွေက မည်သူကမှ အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းမရှိပဲ ယင်းက ယာယီသမ္မတဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အရေးပေါ် အခြေအနေဟု ကြေညာကာ နိုင်ငံ့အာဏာ ၃ ရပ် အား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်ကို လွှဲအပ်‌ကြောင်း စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီမှ ကြေငြာခဲ့သည်။သို့သော်ငြားလည်း စစ်တပ်၏ အစိုးရအဖွဲ့ကို မည်သည့်နိုင်ငံကမှ အသိအမှတ် ပြုထားခြင်းမရှိပေ။
အာဏာသိမ်းမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ရည်ရွယ်ချက် အတိအကျကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေ။ စစ်တပ်မှ ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲပေါင်း ၈.၆သန်းကျော် ကွာဟကာ မဲမသမာမှုရှိသည် ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သော်လည်း သက်သေအထောက်အထားပြနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ အများစုကမူ လွန်ခဲ့သည် ၁၀ နှစ်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သော စစ်တပ်၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည်ကျင့်သုံးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ 
အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများကို ရဲနှင့်စစ်တပ်အင်အားအလွန်အကျွံဖြင့် သွေးထွက်သံယို ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် စစ်ကောင်စီ နှင့် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကို တွန်းလှန်ရန် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ထူထောင်ခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက် အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) အမည်ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စစ်အစိုးရကို ခုခံဆန့်ကျင်သော "ခုခံစစ်" ကို တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် လူငယ်ပေါင်းများစွာ သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနက်မှ တစ်ခုအောက်တွင် စာရင်းသွင်းရန်နှင့် လေ့ကျင့်ရန် မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသများသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်  နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပြည်တွင်းစစ်အန္တရာယ်ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟု သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။  CRPH သည် စစ်တပ်ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် "ဖက်ဒရယ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့" ဖွဲ့စည်းရန်လည်း အဆိုပြုခဲ့သည်။  ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)  သည် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ စစ်တပ်ကို ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော် သည် စစ်တပ်မှ မှ အရပ်သားများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်နေခြင်းကို မရပ်တန့်ပါက စစ်ပွဲ ထပ်မံ ဖြစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ 
မတ်လနှောင်းပိုင်းမှစ၍ ပြည်သူများသည် စစ်တပ်၏နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုကို ခုခံကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် တူမီးကဲ့သို့သော လက်လုပ်လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်လာကြသည်။ ပြည်သူများနှင့် စစ်တပ် ကြား လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာနေသလို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် မှလည်း စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ်ရေး အဆောက်အအုံများနှင့် ရဲစခန်းများကို တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်းများလည်း ပိုမိုဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ 
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လိုင်ဇာ အနီးရှိ အလောဘွမ် စစ်စခန်းအား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် မှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဧပြီလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်သည် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် မြေပြင်တပ်များကို အသုံးပြုကာ အခြေစိုက်စခန်းအား ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန် တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း အသေအပျောက်အများအပြာနှင့်အတူ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ 
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် မတ်လ ၂၆ ရက်က စစ်စခန်းတစ်ခုအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်သား ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားသူများကို စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ 
အာဏာသိမ်းမှုအား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်သော ပထမဆုံး လက်နက်ကိုင်ပစ်ခတ်မှုမှာ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကလေး မြို့၌ ဆန္ဒပြသပိတ်စခန်းတစ်ခုအား စစ်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတိုက်ခိုက်မှုကို ပြန်လည်ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင်လည်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 
ဧပြီ ၈ ရက်က ပြည်သူများသည် အမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်များနှင့် မီးလောင်ဗုံးများဖြင့် စစ်သားများကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ခုခံသူ ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး စစ်တပ်မှလည်း အများအပြား ဒါဏ်ရာရခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် တန့်ဆည်မြို့သည် မကြာခဏ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း သေဆုံးသူ မှာ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့အထိ ၆၀၀ ကျော်အထိ ရှိလာခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး တို့ အပါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 
ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့က ရက္ခိုင့်တပ်တော် ၊ တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှင့် မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် တို့ ပါဝင်သော မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ က ရှမ်းပြည်နယ် နောင်မွန်ရဲကင်းစခန်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။ 
ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နိုင်ငံရေးသမား မင်းကိုနိုင်က ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဦးဝင်းမြင့် တို့မှာ ၎င်းတို့၏ မူလရာထူးများအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ စင်ပြိုင်အစိုးရသစ်တွင် ကချင်နှင့် ကရင်လူနည်းစုများက ထိပ်တန်းဦးစားပေးနေရာများတွင် ရှိနေသည်။ အဆိုပါကြေငြာချက်တွင် မင်းကိုနိုင်သည် စင်ပြိုင်အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။  
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့သည် မင်းတပ် တွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့သည်။  မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်သည် ဆန့်ကျင်မှုကို နှိမ်နင်းရန် အင်အားသုံးပြီး မြို့တွင်သို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
မေလ ၁၆ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင် ချင်းပြည်နယ် ကာကွယ်ရေးတပ်က ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရာ စစ်သား ၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ထိုနေ့တွင်ပင် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ စစ်တပ် အခြေစိုက် စခန်းတခုအား သိမ်းယူခြင်းအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်တပ်မှ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စစ်တပ် ၏ တိုက်ခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆီသို့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရက မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (PDF) ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
မူဆယ်မြို့တွင် မေလ ၂၃ ရက်က စစ်တပ်ာ်နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။  
ကယားပြည်နယ် ရှိ ကရင်နီပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KPDF) မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်နယ်မြို့တော် လွိုင်ကော် အနီးရှိ စစ်တပ် စခန်းအချို့ကိုလည်း ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက် ခဲ့သည်။ 
၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့ နှင့် ၃၀ ရက်နေ့တို့တွင် စစ်တပ် သည် အမြောက်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ လွိုင်ကော်နှင့် ဒီမောဆိုးရှိ PDF နှင့် KPDF စခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) မှ အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကသာမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ စစ်သား ၈ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ ပူတာအို၊ ဖားကန့်နှင့် မိုးမောက်မြို့နယ်များတွင်လည်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ 
ဇွန် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိ စစ်တပ်နှင့် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ဖြင့် မြဝတီခရိုင် အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ကျဆုံးခဲ့သည်။ 
ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ရှိ ပီဒီအက်ဖ်၏ လုံခြုံစိတ်ချရသော အဆောက်အအုံကို စစ်တပ်က သံချပ်ကာယာဉ်များ အပါအဝင် အသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်ရေးသမား အများအပြားကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ က ဒီပဲယင်းမြို့လယ်တွင် တော်လှန်ရေးတပ် များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအတွင်း လူ ၂၅ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တွင် တော်လှန်ရေးသမားများက မြေမြှုပ်မိုင်းများဖြင့် ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ တပ်သား ၅၀ ခန့် ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် NUG သည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သည့် ပြည်သူ့ ခုခံတော်လှန်စစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။  
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မြင်သားကျေးရွာတွင် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က စစ်တပ်နှင့် တော်လှန်ရေးတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ 
လွန်ခဲ့သည့် သုံးလတာကာလအတွင်း တိုက်ပွဲများတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၇၀၀ ကျော် ကျဆုံးပြီး ၆၃၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က ကယားပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၄၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်း အရပ်သား တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့မှ ဒေသခံ ၈,၀၀၀ နီးပါးသည် စစ်တပ်မှ နေအိမ်များ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း မီးရှို့ခြင်း တို့ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်မြို့သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။ 
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၃၀ ကျော်နှင့် တော်လှန်ရေးတပ်သား ၁၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း စစ်တပ်မှ စစ်သား ၂၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်း ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၄ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သလို လက်နက်မဲ့ အသက် ၇၀ အရွယ် အရပ်သားတစ်ဦးလည်း စစ်တပ်၏ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။ 
အောက်တိုဘာလ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့က မကွေးတိုင်း ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၄၀ ကျော် ကျဆုံးခဲ့သည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး စစ်တပ်သတင်းပေးသူ/ဒလန် ၄၀၆ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၈၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသော မီဒီယာများက အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။  ထိုနေ့တွင်ပင် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြိုးသန့်အား ဘက်ပြောင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရကာ ယခုအချိန်အထိ ရာထူးမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းသည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး အရာရှိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်က စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့၌ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်အစိုးရ စစ်သည် ၉၀ ခန့် ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သိရသည်။ 
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးမြို့ ပီဒီအက်ဖ် အခြေစိုက် စခန်းအား စစ်အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များက သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကလေးပီဒီအက်ဖ်မှ ဆေးတပ်သား ၉ ဦး ဖမ်းမိခဲ့ကာ ကလေး PDF တပ်ရင်း ၃ မှ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၂ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ 
နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ မိုးဗြဲပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) ၏ ကင်းစခန်းအား ဒါဇင်နှင့်ချီသော အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များက ခြုံခိုတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ကင်းစခန်းအား စောင့်ကြပ်နေသော PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ အိပ်ပျော်နေစဉ် ခြေမြန်တပ်ရင်း (ခမရ) ၄၂၂ မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရတပ်များက ဝိုင်းရံထားသောကြောင့် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ကင်းစခန်းမှ ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ 
နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်ကလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ပလ္လင်ကျေးရွာအနီးရှိ ပီဒီအက်ဖ် နယ်မြေခံတပ်ရင်း ၂၀၅ အား ဘူဒိုဇာမြေထိုးစက်များအပါအဝင် စစ်ကား ၁၀ စီး၊ စစ်သား ၃၀ ခန့်က ချောင်းမြောင်းဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ အခြေစိုက်စခန်းသည် PDF မှ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံနေရာလည်းဖြစ်သည်။ စီးနင်းမှုအတွင်း စစ်အစိုးရတပ်များက လက်နက်များ သိုလှောင်ထားသည့် အဆောက်အအုံနှစ်ခုကို မီးရှို့ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ် ဒီမောဆိုးမြို့နယ် ဟိုဖိတ်ကျေးရွာအနီးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်များက ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကရင်နီအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDF) မှ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၄ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ၄ ဦးမှာ နံနက် ၅ နာရီ ၃၀ ခန့်တွင် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၄၂၇ မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရသော ကင်းထောက်အဖွဲ့မှ တပ်သား ၆ ဦးဖြစ်သည်။ 
ထို့အပြင်ရွှေကူမြို့အရှေ့ဘက် ၁၆ ကီလိုမီတာအကွာရှိ ကချင်အေးကျေးရွာအနီးတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် နှင့် စစ်တပ်မှ စစ်သား ၁၀၀ ခန့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်ဟူသော ကောလာဟလများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲကြောင့် KIA ၏ ကျဆုံးသူစာရင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။ မကြာသေးမီက ရရှိထားသော Su-30 ဂျက်တိုက်လေယာဉ် ၂ စင်းက စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့သည့် လေကြောင်းမှ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုနေ့တွင်ပင် မတူပီ CDF သည် ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းကာ မတူပီမြို့နှင့် ပလက်ဝမြို့ကို ဆက်သွယ်သည့် လမ်းပေါ်တွင် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၀၄ ကင်းစခန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆုတ်ခွာသွားခြင်းမပြုမီတွင် ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့များက အစောင့်တပ်သား ၂ ဦးကိုသာ သတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့အနီးတွင် တပ်စွဲထားသည့် ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CDF) မှ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများက စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်သား ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ 
မတ္တရာမြို့နယ် အရှေ့တောင်ဘက် တောတောင်ကုန်းများတွင် ယခင်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမား ရဲသူနိုင်အား နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းမိခဲ့ပြီး စစ်သားများက စခန်းအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် PDF အခြေစိုက်စခန်းသို့ အတင်းအဓမ္မ ပို့ဆောင်ခိုင်းခဲ့သည်။ 
မိုးညှင်းတွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ပြီး တစ်ပတ်ခန့်အကြာ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၄၂) မှ စစ်သား ၅၀ ခန့်က မိုးညှင်းမြို့နယ် ညောင်ထောက်ရွာအနီး KIA နယ်မြေကို နံနက် ၈ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ၎င်းတို့ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။ ဖားကန့်မြို့လယ် ၁၇ မိုင်ခန့်အကွာ၊ ဖားကန့်မြို့နှင့် မိုးညှင်းမြို့ကို ဆက်သွယ်သည့် ကားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ဝေလုံကျေးရွာအနီး၌လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခြေလျင်တပ်ရှေ့တိုးနိုင်ရေးအတွက် ညနေ ၃ နာရီမှ ၈ နာရီအထိ လက်နက်ကြီး အမြောက်အချက်ရေ ၃၀ ခန့်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်း ညလုံးပေါက် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သိန်းမင်း PDF (TM-PDF) စခန်းကို သိမ်းပိုက်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီး TM-PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၂ ဦး သေဆုံးကာ အခြားအများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒုံးတောရွာအတွင်း၌ စစ်တပ်မှ အရပ်သား ၁၁ ဦးအား ဖမ်းဆီး၍ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် မီးလောင်ကျွမ်းဆဲဖြစ်သော အလောင်းများကို ဒေသခံများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အနီးနားတွင် သွားလာနေသော စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းအား PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပြီးတွင် စစ်အစိုးရစစ်သား ၁၀၀ ခန့်က ရွာကို ဝင်ရောက်မွှေနှောက်သွားခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုတွင် နောက်ထပ်လူတစ်ဦးမှာ အရပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မသိရပေ။
ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်က သိမ်းပိုက်ထားသော ထန်တလန်မြို့တွင် စစ်တပ် နှင့် CDF တပ်ဖွဲ့တို့ မိနစ် ၉၀ ကြာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်တပ်က CDF မှ မြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်စေရန် ဦးတည်သည့် ကြီးမားသော ထိုးစစ်ကို ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ပြီးနောက်၊ တိုက်ပွဲအတွင်း CDF တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသီတင်းပတ်အတွင်း စစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားသည့် ထန်တလန်မြို့တွင် နေအိမ် ၁၂ လုံး မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ချင်းပြည်နယ် မြို့တွင်း အဆောက်အအုံ လေးပုံတစ်ပုံကျော် ပျက်စီးခဲ့ကာ ၂ဘက်လုံးမှ အကာအကွယ်ယူ ပစ်ခတ်ရန် ခက်ခဲသွားသည်။ 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) မှ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက လက်လုပ်ဗုံး ၃ လုံးဖြင့် စစ်ကားနှစ်စီးအား ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် အနည်းဆုံး စစ်သား ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း PDF တွင်က ဆိုသည်။ မွန်းတည့်အချိန်၌ PDF သည် မင်းသားကျကျေးရွာသို့ ခြေလျင်ထွက်ခွာလာသော စစ်သားများအား ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုတိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသေအပျောက် သတင်းများ မရှိခဲ့ပေ။ 
KNDF နှင့် ကရင်နီတပ်မတော် (ကေအေ) တပ်ဖွဲ့များနှင့် တပ်မတော် ခြေမြန်တပ်ရင်း (၄၂၈) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲများ ၄ ရက်ကြာ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်သား (၄)ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း KNDF ကဆိုသည်။ "သေသွားတာလားတော့ မသိဘူး။ အနည်းဆုံးခန့်မှန်းခြေကတော့ သုံးယောက်နဲ့ လေးယောက်ကြားမှာ စစ်တပ်ဘက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ ယူဆထားတယ်" ဟု KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။   နှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခေါင်းကွဲကျေးရွာ၌ တပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးနှင့် PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်မှ လက်နက်ကြီးများနှင့် စနိုက်ပါများဖြင့် အင်အားအလွန်အကျွံ အသုံးပြုပြီးနောက် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ရွာမှ ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ 
ထိုနေ့တွင်ပင် ခုခံ ခိုအောင်းရာ နေရာ နှစ်ခုကို စစ်တပ်က ဝင်ရောက် စီးနင်းမှု ကြောင့် မန္တလေး အရပ်ဘက် ပြောက်ကျားတပ်သား ၈ ဦးကို သေဆုံးခဲ့သည်။ စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မဟာအောင်မြေနှင့် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်များရှိ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (PDF) များကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာ တပ်မတော်တပ်သားများအား တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူဟု သံသယရှိသူတစ်ဦးမှ ဝန်ခံပြီးနောက် အဆိုပါစီးနင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မဟာအောင်မြေစခန်း၌ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် PDF အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦး ကျဆုံးကာ စစ်ကောင်စီတပ်သားတစ်ဦး ဝမ်းဗိုက်တွင် ကျည်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ကြီးတံခွန်စခန်း၌ စစ်အစိုးရတပ်များအား လက်လုပ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ကာ ထွက်ပြေးကြစဉ် PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ 
ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်က အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ကူညီနေသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း အရာတော်မြို့နယ် ကဲဘာကျေးရွာတွင် ဇေယျာ ၇ ဟု ခေါ်သည့် အခြား ဒေသခံ တော်လှန်ရေးသမားများအား ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် စစ်တပ်၏ လက်နက်အင်အား သာလွန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ 
ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဗုံးအများအပြား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃ ဦး အပါအဝင် သံသယရှိသူ ၁၂ ဦးကို တပ်မတော်မှ PDF ဟုစွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည့် နောက်ထပ် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၂ ဦးကိုလည်း ကျည်ကာအင်္ကျီများ ၀တ်ဆင်ထားသည့် အရပ်ဝတ် လက်နက်ကိုင် စစ်ကောင်စီတပ်သားများက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ လက်လုပ်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် အခြားပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ သေဆုံးမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ဒီပဲယင်း PDF တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ နေရာယူထားသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဒီပဲယင်းမြို့နယ်ကို တပ်မတော်မှ ဝိုင်းရံထားသည်ဟု ဒီပဲယင်း PDF ခေါင်းဆောင်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ “တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီ။ မနားတော့ဘူးဗျ။ စစ်ကြောင်းက တစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်း လာနေတာ။ တစ်ကြောင်းက ဒီရွာကို ဖြတ်သွားရင် နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းက ဒီရွာကို ဦးတည်နေပြီ။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ” ဟု ဒီပဲယင်း PDF ခေါင်းဆောင်မှ Myanmar NOW သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်လမှစတင်၍ တပ်မတော်သည် လေကြောင်း ချေမှုန်းရေး မစ်ရှင်များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဒီပဲယင်းမြို့ အနောက်ဘက်သို့ ရဟတ်ယာဉ် ခြောက်စီးဖြင့် လေကြောင်းချီတပ်မှ စစ်သား ၁၅၀ ခန့် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ 
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၆ လက်အောက်ရှိ ထိုင်းနယ်စပ်အနီး လေးကကော်မြို့သစ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က တပ်မတော်မှ စစ်သား ၂၀၀ ခန့်ဖြင့် ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ NLD အမတ် ဝေလင်းအောင် အပါအဝင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆရသော လူအများအပြားကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ခြေမြန်တပ်ရင်း ၅၆၀ မှ ယာဉ်တန်းလေးစီးဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လေးကေကော်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရပ်ကွက်တွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီးနင်းမှုကို ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို KNU တပ်မဟာ (၆) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
ယောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (YDF) အစည်းဝေးကျင်းပနေသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ် နှမ်းခါးကျေးရွာကို တပ်မတော်က လေကြောင်းမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က ယောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၂၀ ကျဆုံးခဲ့သည်။ ရွာကို လေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် ရဟတ်ယာဉ်သုံးစင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ နှမ်းခါးရွာကို စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု ပျူစောထီးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင် ၁၅၀ ခန့်က သိမ်းပိုက်ထားသည်ဟု ရွာခံတစ်ဦးက ပြောသည်။  ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်တွင် တပ်မတော်က ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုအတွင်း ဒေသခံ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရပြီး အခြား သုံးဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် လဟာရပ်ကျေးရွာအနီးရှိ နေအိမ်တစ်လုံးအား စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့မှ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး ရင်ဘတ်နှင့် ပေါင်တို့တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ပြီး အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ သေဆုံးနေသည့် ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးသမား၏ ရုပ်အလောင်းကို စစ်သားများက သိမ်းယူသွားကာ သေဆုံးသူမှာ ဖြိုးမောင်မောင်ဦးဖြစ်ကြောင်း သန်လျင်အခြေစိုက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတစ်ခုက ဆိုသည်။ 
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကရင်နီအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) မှ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ကွန်နားကျေးရွာမှ တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ KNDF အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သီတင်းပတ်ကုန်တွင် ခွန်းနား တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃၀ ခန့် တပ်စွဲထားကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တနင်္လာနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့များတွင် တိုက်ပွဲ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့နယ် မိုဆိုရွာအနီးတွင် စစ်ဘေးရှောင်ယာဉ်တန်းကို စစ်တပ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်က အလစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ လူ ၃၅ ဦးထက်မနည်း သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသေဆုံမှုများတွင် အကျိုးအမြတ်မယူသော Save the Children အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။  အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ 'စေ့စေ့စပ်စပ် ပွင့်လင်းမြင်သာသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု' ပြုလုပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂက တောင်းဆိုထားသည်။
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်က မကွေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် သုံးရက်ကြာ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သား အနည်းဆုံး ၃ ဒါဇင်ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကနီမြို့နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဟာမိတ်ပျူစောထီးပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့ဝင် အယောက် ၃၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရက ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့် စစ်သည်များ သယ်ဆောင်သည့် သင်္ဘောများကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အနည်းဆုံး သင်္ဘောတစ်စီး မီးလောင်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က စစ်အစိုးရလိုလားသော လူထုစုဝေးပွဲတွင် ဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး ၃၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ပြောကြားချက်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှုမှ စတင်ကာ ပစ်မှတ်ထားသော တိုက်ခိုက်မှုများတွင် စစ်အစိုးရက ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိ ၃၆၇ ဦး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း နယ်မြေခံ PDF များ၏ လျပ်တပြတ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သား ၃၈ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ဒရုန်းများ အသုံးပြုမှုလည်း ပါဝင်သည်။  ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် သုံးရက်ကြာ တိုက်ပွဲများအတွင်း တပ်ရင်းမှူး အပါအဝင် စစ်ကောင်စီ စစ်သည် ၂၀၀ ခန့် ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်က ပြောဆိုထားသည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော် နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မီးတိုက်ကျေးရွာ အရှေ့မြောက်ဘက် လက်ပံတောင်အနီးရှိ AA ကင်းစခန်းအား ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်က ခိုးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ AA ကင်းသမားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခက ပြောသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့အထိ ၃ နာရီကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများကြောင့် AA နှင့်စစ်တပ်တို့ကြား ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အလွတ်သဘော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ပြားသွားမည့်အရေးကို စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။  မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ညက ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် အရပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးများတွင် နယ်မြေခံ PDF များ ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သား ၃၅ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။  အရပ်သားများကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လေတပ် လေယာဉ်မှူးများ၏ နေအိမ်များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဖေဖေော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မြို့နယ် ၃ ခုတွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက ဝင်ရောက် စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ 
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်က ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ AA ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး အပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်တို့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၈ ဦးနှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ 
နေပြည်တော်၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် PDF တပ်ဖွဲ့များက တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ နှင့် ၁၃ ရက်များတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၄၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ မြို့သစ်ရွာအနီး၌ စစ်သားနှင့် ပျူစောထီးအင်အား ၈၀ ခန့်နှင့် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် နှစ်ဦးအပါအဝင် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးကျဆုံးခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှာပင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ မိုးဗြဲ ဝါရီဆူးပလိုင်ရွာအနီးတွင် ထိုးစစ်ဆင်လာသော စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်များ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀ ဝန်းကျင်ခန့် ကျဆုံးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်မြို့နယ် ရေပြာရွာ ရဲစခန်းကို ပေါက်၊ မြိုင်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်တို့မှ PDF အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စခန်းမှူးအပါဝင် ရဲ ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် ကာမိုင်းမြို့အနီးရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကို KIA တပ်မဟာ ၉ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၄၄ နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ပူးပေါင်းတပ်များက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၂ ဦးနှင့် အရပ်သား ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ငါးပိအိုးကျေးရွာသို့ စစ်ကောင်စီတပ်များ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် လူတစ်ဦးသေဆုံးကာ အိမ်ခြေ ၄၀ ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ နှမစားရစ်ရွာသို့ စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ပျူစောထီးပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ လေးကြိမ်မြောက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ဒေသခံ ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၄၀၀ ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တွင် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကရင်နီပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၈၅ ဦး သေဆုံးပြီး နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
↑ ပြည်သူ့ခုခံ တော်လှန်စစ်သတင်းများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)၊4February 2022 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ၊ 2022-02-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ "Myanmar Violence Escalates With Rise of 'Self-defense' Groups, Report Says"၊ June 27, 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 January 2022။
↑ "Myanmar anti-coup insurgents destroy police post, kill security forces -media"၊ May 23, 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5January 2022။
↑ "The deadly battles that tipped Myanmar into civil war"၊ 2022-02-01။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 February 2022။
↑ 10 Conflicts to Worry About in 2022: Myanmar။
↑ UCDP Candidates data set January to December 2021: Version 21.01.21.12 (31 January 2022)။
↑ Myanmar military announces new State Administrative Council (2 February 2021)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 15 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Min Aung Hlaing: the heir to Myanmar's military junta (in en) (1 February 2021)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar shadow government calls for uprising against military"၊ aljazeera.com၊7Sep 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 September 2021။
↑ 'The last fight': With growing support for federal army, Kachin prepares for war (3 April 2021)။3April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UN envoy urges action to prevent Myanmar 'civil war'"၊ 1 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 May 2021။
↑ "As slaughter of civilians continues, some decide it's time to take up arms"၊ 30 March 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 March 2021။
↑ KIA says more clashes likely despite junta's ceasefire announcement။2April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brotherhood Alliance tells military to stop killings, threatens to abandon ceasefire။ 30 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Junta Is Dragging Myanmar Into Full-Blown Civil War (in en-US) (2 April 2021)။ 10 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Junta's armed forces launch attack to reclaim base seized by KIA။3June 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "10 soldiers killed in Myanmar base attack: Rebel group"၊ 27 March 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 April 2021။
↑ Myanmar Villagers Take Up Homemade Weapons Against Regime's Security Forces (in en-US) (2 April 2021)။ 10 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Eleven killed as Myanmar protesters fight troops with hunting rifles, firebombs – media"၊ Reuters၊ 8 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 April 2021။
↑ "MYANMAR'S MEDIATION BLUES: Negotiation or zero-sum game?"၊ BNI၊3June 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3June 2021။
↑ "Ten Myanmar policemen killed in attack by ethnic armies opposed to junta-report"၊ Reuters၊ 10 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 April 2021။
↑ "Aung San Suu Kyi supporters unveil Myanmar 'national unity government'"၊ Financial Times၊ 16 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 April 2021။
↑ "Opponents of Myanmar's junta set up national unity government"၊ France24၊ 16 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9May 2021။
↑ "Archived copy"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2June 2021။
↑ "Fighting erupts in eastern Myanmar near Thai border"၊ www.aljazeera.com။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 12 May 2021။
↑ "Can Myanmar's New 'People's Defense Force' Succeed?"၊ 26 April 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9May 2021။
↑ "Myanmar rebels claim police killings as Aung San Suu Kyi appears in court" (in en)၊ The Guardian၊ 24 May 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 May 2021။
↑ "Myanmar: 13 security forces members killed in clash with anti-coup bloc's defence force"၊ ANI News၊ 24 May 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 May 2021။
↑ "Karenni resistance fighters open new front against junta" (in en)၊ Myanmar Now၊ 26 May 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 May 2021။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 June 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Junta Forces and KIA in Fresh Fighting in Northern Myanmar (31 May 2021)။2June 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Karen Rebel Leader Warns Myanmar Regime of More Fighting"၊3June 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5June 2021။
↑ "Myanmar Junta Troops Battle Civilian Resistance Fighters in Mandalay"၊ 22 June 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 February 2022။
↑ Myanmar military kills at least 25 people in raid on central town။3February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 50 Myanmar Junta Soldiers Killed in Landmine Attacks https://www.irrawaddy.com/news/burma/50-myanmar-junta-soldiers-killed-in-landmine-attacks.html Archived 14 February 2022 at the Wayback Machine.
↑ "၂၀၂၁ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်း - NUG က နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ - ဘီဘီစီ မြန်မာ"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 January 2022။
↑ "Myanmar opposition announces 'defensive war' against junta"၊7September 2021။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2February 2022။
↑ Deadly unrest reported in Myanmar after opposition urges 'defensive war' https://www.reuters.com/world/asia-pacific/deadly-unrest-reported-myanmar-after-opposition-urges-defensive-war-2021-09-10 Archived 18 January 2022 at the Wayback Machine.
↑ Over 1700 Junta Soldiers Killed in Past Three Months, Civilian Government Says (14 September 2021)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scores of Myanmar Regime Troops Killed in Clashes With Civilian/Ethnic Groups (21 September 2021)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar: Whole town flees amid fierce fighting။ 26 November 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Over 30 Junta Soldiers Killed In Fierce Weekend Fighting (27 September 2021)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Junta Troops Ambushed in Shan State (28 September 2021)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Over 40 Myanmar Soldiers Killed in Ambush။ The Irrawaddy (6 October 2021)။6October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hundreds Of Myanmar Junta Informants Killed Or Wounded။ The Irrawaddy (7 October 2021)။7October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar Military Detains North Western Commander For Planning to Defect: Ethnic Insurgent Sources။ The Irrawaddy (7 October 2021)။7October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Some 90 Junta Soldiers Killed During Intense Weekend Fighting (11 October 2021)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Soldiers capture PDF medics during raid on resistance base camp in Kalay"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 28 January 2022။
↑ "Dozens of junta troops ambush Moebye PDF outpost"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 20 January 2022။
↑ "Military raid destroys resistance base in Monywa, PDF says"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 January 2022။
↑ "Military kills four KNDF members in Demoso"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3December 2021။
↑ "Military deploys Russian-made fighter jets against KIA targets"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6December 2021။
↑ ၅၅.၀ ၅၅.၁ "Chinland Defence Force attacks junta soldiers in Matupi"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2022။
↑ "PDF member in Mandalay Region killed in junta custody"။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3December 2021။
↑ "KIA clashes with junta soldiers in Hpakant and Mohnyin"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6December 2021။
↑ Awaiting for official news report to be used as citation
↑ မောင်ရွှေဝါ။ "လူအစုလိုက် မီးရှို့သတ်ခံရသည့် ဆားလင်းကြီးတွင် ရုပ်အလောင်းထပ်တွေ့"၊ Myanmar NOW၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 February 2022။
↑ "Well overaquarter of Thantlang now destroyed by fire as rebel group vows to 'drive out' junta soldiers"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 December 2021။
↑ "Soldiers target villagers after ambush by Myaing PDF"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 January 2022။
↑ ကယားပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ပြင်းထန်နေ (in my)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Clashes in Kayah State kill at least four regime soldiers: KNDF"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 December 2021။
↑ "Soldiers kill and burn five people in Sagaing Region village after clashes with PDF"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 February 2022။
↑ "Myanmar Junta Claims to Have Killed 8 Resistance Fighters in Mandalay Raids"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 February 2022။
↑ "Myanmar military torches 100 homes in Sagaing Region village"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 December 2021။
↑ "Three injured guerrilla fighters among 12 arrested after accidental explosion in Yangon"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 December 2021။
↑ "Junta soldiers murder three more villagers in Depayin"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 February 2022။
↑ "At least 20 killed in air raid on Magway village"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 December 2021။
↑ "One resistance fighter killed, three arrested in Thanlyin raid"၊ Myanmar NOW။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 December 2021။
↑ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ကွန်နားရွာတွင် နေအိမ်အများအပြား မီးထပ်ရှို့ခံရ (in my) (၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁)။ 15 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UN 'horrified' by massacre of dozens of civilians in Myanmar"၊ Myanmar NOW၊ December 26, 2021။ February 1, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 December 2021။
↑ Myanmar Resistance Kills Dozens of Junta Soldiers in Three Days of Clashes။ The Irrawaddy (January 31, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 1, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thirty Junta Soldiers reportedly killed in Upper Myanmar။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Two Killed, 38 Injured at Rally Attack on Myanmar Coup Anniversary။ The Irrawaddy (February 2, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 2, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Almost 370 Junta Officials Assassinated Since Coup။ The Irrawaddy (February 2, 2022)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 3, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 38 Junta Soldiers Reported Killed in Upper Myanmar။ The Irrawaddy (February 7, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 7, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Over 200 Myanmar Junta Troops Killed in Three Days: Kachin Independence Army။ The Irrawaddy (February 7, 2022)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 7, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Junta Troops Clash With Arakan Army in Western Myanmar။ The Irrawaddy (February 8, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စစ်တပ်နှင့် AA တို့ တိုက်ပွဲကြား အရပ်သား ၂ ဦး သေဆုံး (၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။ 15 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Two Civilians Dead in Clash Between AA, Regime Troops in Myanmar's Rakhine State။ The Irrawaddy (February 8, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Resistance Groups Claim to Kill 35 Myanmar Junta Troops။ The Irrawaddy (February 9, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ လေတပ်အရာရှိ နေအိမ်များကို တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ် ဟု PDF ဆို (၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။ 15 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Resistance Fighters Claim To Have Killed Around 50 Myanmar Junta Personnel။ The Irrawaddy (February 10, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ တကျော့ပြန် ရခိုင်တိုက်ပွဲ ဗိုလ်မှူးအဆင့် အပါအဝင် စစ်တပ်အကျအဆုံးများ (၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။ 15 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dozens of Junta Soldiers Killed in Sagaing, Kayah, Myanmar Resistance Groups Say။ The Irrawaddy (February 11, 2022)။ 13 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Junta Soldiers Killed; Social Media Users Boycott Myanmar Coup Leader’s Parade။ The Irrawaddy (14 February 2022)။ 14 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ခင်ဦးမြို့ တိုက်ပွဲတွင် လူငယ် ၁၄ ဦး သေဆုံး (in my) (၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။ 20 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည့် မိုးဗြဲနှင့် ခင်ဦးတွင် PDF ၃၀ ဝန်းကျင် ကျဆုံး (၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။ 20 February 2022 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 February 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ပေါက်မြို့ ရေပြာရဲစခန်းကို PDF ၃ ဖွဲ့ ဝင်တိုက်၊ စခန်းမှူးအပါအဝင် ၅ ဦး သေ (in my) (၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။
↑ ကချင် ကာမိုင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို KIA နှင့် PDF ဝင်တိုက် (in my) (၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။
↑ ရွှေဘိုမြို့ ငပိအိုးရွာကို စစ်တပ်ဝင်၊ အိမ် ၄၀ မီးလောင်ပြီး လူငယ် ၁ ဦး သေဆုံး (in my) (၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။
↑ စစ်တပ်ဝင်သည့် ရွှေဘိုမြို့ နှမစားရစ်ရွာတွင် ၃ ဦးသေ၊ အိမ် ၄၀၀ မီးလောင် (in my) (၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)။
↑ Myanmar Junta Suffers Heavy Losses in Kayah State: Resistance။ The Irrawaddy (March 7, 2022)။ March 7, 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်&oldid=737373" မှ ရယူရန်
၂၀၂၁ ရှိ ပဋိပက္ခများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၇:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။